आकर्षण ‘टु इन वान’ लेडिज ब्यागको | गृहपृष्ठ
Home बजार आकर्षण ‘टु इन वान’ लेडिज ब्यागको
आकर्षण ‘टु इन वान’ लेडिज ब्यागको
असार ९, काठमाडौं (अस)। आजभोलि विद्यालय तथा कलेज जाने अधिकांश युवतीहरूले ‘टु इन वान’ लेडिज ब्याग बोकेको देखिन्छ । आवश्यकताअनुसार दुई भिन्न तरिकाले बोक्न सकिने यस्तो ब्याग विशेषगरी युवतीहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘साइड ब्याग तथा क्रस ब्याग दुवैका रूपमा टु इन वानलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ विरा कम्प्लेक्स स्थित फर्च्युन इण्टरप्राइजेजका विक्रेताईश्वर चौलागाईंले भने । अहिले विशेषगरी कलेज तथा कार्यालय जाने युवतीहरूले टु इन वान ब्याग रोज्ने गरेको उनले बताए ।
फर्च्र्युन इण्टरप्राइजेजबाट दैनिक करीब ५ सय ब्याग विक्री हुने गरेको छ । यसमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी ‘टु इन वान’ लेडिज ब्याग विक्री हुने गरेको विक्रेता चौलागाईंले जानकारी दिए । यहाँ पोलो, एलबी, स्लोन्लीलगायत ब्राण्डका ब्याग उपलब्ध छन् । यस्ता ब्यागको मूल्य ६ सयदेखि १ हजार २ सय रुपैयाँसम्म पर्ने उनले बताए । फर्च्र्युनले काठमाडौंका विभिन्न मल तथा शो-रूमहरूमा ब्यागको थोक विक्रीसमेत गर्ने गरेको छ ।
विभिन्न डिजाइन तथा रङमा उपलब्ध टु इन वान लेडिज ब्याग नयाँ उत्पादन भएकाले पनि यसको व्यवसाय बढेको बताइन्छ । ‘युवतीहरूमा भएको देखासिखी प्रवृत्तिले पनि टु इन वान ब्यागको व्यापार बढेको हो,’ विरा कम्प्लेक्सकै एचएन ट्रेर्डसका युसफले भने ‘टु इन वान लेडिज ब्याग अहिलेको फेशन भएको छ ।’ एचएन ट्रेर्डसमा नाइक, क्याट, एडिडासलगायत ख्यातिप्राप्त ब्राण्डका ब्यागहरू उपलब्ध रहेको छ । यहाँ उपलब्ध ब्यागहरू २ सयदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्ममा खरीद गर्न सकिने उनले बताए । विगत १२ वर्षदेखि ब्यागको व्यवसाय गर्दै आएको एचएनबाट दैनिक ७ हजार रुपैयाँबराबरका ब्याग विक्री हुने गरेको छ ।
महाबौद्ध स्थित शुभकामना ब्याग स्टोरका सञ्चालक अनिल श्रेष्ठ पनि टु इन वान लेडिज ब्यागको व्यवसाय बढेकोमा सहमत छन् । ‘हाम्रो शोरूमबाट दैनिक २ सय ५० ओटा ब्याग विक्री हुन्छ,’ सञ्चालक श्रेष्ठले भने ‘यसमध्ये सबैभन्दा बढी टु इन वान ब्याग विक्री हुने गरेको छ ।’ शुभकामनाबाट ब्यागको थोक तथा खुद्रा विक्री हुने गरेको छ । रू. १ सय देखि १ हजार ५ सयसम्म मूल्य पर्ने यस्ता ब्याग विभिन्न डिजाइन तथा रङमा उपलब्ध छ ।
त्यस्तै, काठमाडौंमा रहेको विभिन्न ब्राण्डका शो-रूम तथा अन्य पसल पनि ‘टु इन वान’ लेडिज ब्यागको व्यवसाय बढेको बताउँछन् । आकर्षक देखिने यस्ता ब्यागहरू विद्यालय/कलेज, कार्यालय तथा अन्य प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने उनीहरू बताउँछन् ।
उच्च शिक्षा तथा क्यारियर मेला शुरू
असार ९, काठमाडौं (अस) । ‘उच्च शिक्षा तथा क्यारियर मेला-२०११’ बुधवारदेखि शुरू भएको छ । डाइरेक्सन नेपालको आयोजनामा भृकुटीमण्डप स्थित प्रदर्शनी हलमा शुरू भएको मेला असार १२ गतेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ । भर्खरै एसएलसी तथा प्लस टु पास भएका विद्यार्थी लक्षित मेलाको ७० हजार दर्शकले अवलोकन गर्ने आयोजकको दाबी छ ।
मेलामा देश तथा विदेशका शैक्षिक संस्था तथा शैक्षिक प्रणलीबारे जानकारी दिइने मेलाका संयोजक सुमन महर्जनले बताए । साथै, विद्यार्थी र अभिभावकलाई उच्च शिक्षाबारे विश्वसनीय सूचना तथा आवश्यक पर्ने परामर्श पनि उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए ।
देशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी शिक्षा लिन चाहनेलाई मेला सहयोगी हुने बताइएको छ । ‘विद्यार्थी तथा अभिभावकले एकै छानामुनि सम्पूर्ण शैक्षिक जानकारी लिन सक्नेछन्,’ महर्जनले भने । मेलामा विभिन्न विषयको अध्यापन गराउने सयभन्दा बढी शैक्षिक संस्थाले भाग लिएका छन् । अवलोकनकर्ताले मानविकी, व्यवस्थापन र विज्ञान सङ्कायका साथै फेशन टेक्नोलोजी, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट, डेण्टल, ट्राभल एण्ड टुरिजम, नसिङलगायत विषयका बारेमा जानकारी पाउनेछन् । मेला प्रवेशका लागि २५ रुपैयाँको टिकटको व्यवस्था गरिएको आयोजकले जानकारी दिएको छ । मेला हरेक दिन बिहान ११ देखि साँझ ६ बजेसम्म चल्नेछ ।
विद्यार्थीले रोजेको विषय र कलेज खोज्नुपर्ने समस्याको समाधान मेलाले गर्ने महर्जनले बताए । मेला अवधिभर ब्रोडलिङ्क नेर्टवर्क तथा कम्युनिकेशन प्रालिले प्रदर्शनी क्षेत्रमा इण्टरनेट सेवा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने बताएको छ । उच्च शिक्षा तथा क्यारियर मेलाको यो नवौं संस्करण हो ।
मोलिस हाजिरीजवाफ प्रतियोगिताको सेमिफाइनल सम्पन्न
मोलिस उपत्यकाव्यापी हाजिरीजवाफ प्रतियोगिताको सेमिफाइनलका चारै समूहका प्रतिस्पर्धा सम्पन्न भएका छन् । बिहीवार सम्पन्न पहिलो समूहको सेमिफाइनल प्रतियोगिताबाट कल्याण मावि धापाखेल फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । त्यस्तै दोस्रो समूहको सेमिफाइनलबाट पीइएफ इन्षिटच्युट, बागबजार फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । बिहीवारै सम्पन्न तेस्रो समूहको सेमिफाइनलबाट माउण्ट सेब हाइस्कूल र अन्तिम सेमिफाइनलबाट सन्तानेश्वर मावि झरुवारासी फाइनल पुग्न सफल भएका छन् । प्रतियोगिताको फाइनल प्रतिस्पर्धा असार १९ गते आइतवार सञ्चालन हुने मूनलाइट उच्च माविका प्राचार्यईश्वरबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । उक्त फाइनल प्रतियोगिताको सञ्चालन चर्चित अभिनेता राजेश हमालले गर्ने आयोजकले बताएको छ ।
ग्राण्डी भिल्लाको बुकिङ खुला
सीई कन्ष्ट्रक्सन प्रालिले निर्माण गर्ने ‘ग्राण्डी भिल्ला’ अपार्टमेण्टको बुकिङ खुला गरिएको छ । आकर्षक र गुणस्तरीय ‘ग्राण्डी भिल्ला’ सामाखुसी चोकबाट २ किलोमिटर भित्र रहेको ग्राण्डी इण्टरनेशनल हस्पिटलसँगै रहेको छ । मध्यमवर्ग लक्षित उक्त अपार्टमेण्टको मूल्य ४८ लाख रुपैयाँबाट शुरू हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
मदर्स च्वाइसको बेबी डाइपर्स
मलेसियाको ब्राण्ड मदस च्वाइसको उत्पादन डिस्पोजेबल बेबी डाइपर्स नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । यसलाई बजारमा नेपालका लागि मदस च्वाइसको आधिकारिक विक्रेता खाटु इण्टरनेशनल प्रालिले भित्र्याएको हो । आधुनिक प्रविधिबाट निर्मित मदस च्वाइस बेबी डाइपर्स आईएसओ ९००१:२००० प्रमाणपत्र प्राप्त डाइपर्स भएको कम्पनीले बताएको छ । यो डाइपर्स दिसापिसाबको चुहावट रोक्ने गरी यु आकारमा उत्पादन गरिएको छ । यस डाइपर्समा एडीएल लेयर रहेको छ, जसले पिसाब गरेको बेलामा समेत बच्चाको छालालाई सुख्खा राख्छ ।
नवरत्नको शिर मालिस योजना
नवरत्न तेलले नि:शुल्क शिर मालिस योजना ल्याएको छ । योजनाअनुसार नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा नवरत्नको स्टल राखी नि:शुल्क शिर मालिस गरिदिने कम्पनीले बताएको छ । प्रचण्ड गर्मी मौसममा ग्राहकहरूमा तन्दुरुस्ती जगाउन यस्तो योजना ल्याएको नेपालका लागि नवरत्नको ब्राण्ड म्यानेजर निलन महतले बताए । यस्तो योजना काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्जलगायत नेपालका प्रमुख शहरहरूमा उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए । जो कोही पनि सहभागी हुन पाउने यस योजना ४५ दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । ‘चिसो-चिसो कुल-कुल’ भन्ने नाराका साथ बजारमा आएको नवरत्न तेल हाल विशेष गरेर दक्षिण पूर्वी एशिया र खाडी मुलुकहरूमा अत्यन्त लोकप्रिय रहेको बताइएको छ ।
हिमालयन र जेसीबीबीच सम्झौता
हिमालयन बैङ्क लिमिटेड, नेपाल र जेसीबी इण्टरनेशल, जापानबीच बिहीवार एक सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार हिमालयनको एटीएम स्वीकार्ने जुनसुकै मेशिनले जेसीबीका एटीएम कार्ड पनि स्वीकार्ने भएको छ । यससँगै जेसीबीको कार्ड लिएर नेपाल आउने पर्यटकहरू लाभान्वित हुने बताइएको छ । जेसीबीका ६ करोड ९० लाख एटीएम प्रयोगकर्ताहरू रहेका छन् । ती जापान, कोरिया, ताइवानलगायत मुलुकका रहेका कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यसले पर्यटन वर्ष२०११ लाई पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बैङ्कले बताएको छ । यसैबीच अल्पाइन कार्ड सर्भिस -एसीसीअन्तर्गतको कम्पनी स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजी (एससीटी)ले सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण एटीएम मेशिनले पनि जेसीबीका एटीएम कार्ड स्वीकार्ने भएको छ । बिहीवारै एसीसी र जेसीबीबीच भएको सम्झौताअनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
कमर्ज एण्ड ट्रष्टका एकै दिन थप दुई शाखा
कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैङ्क नेपाल लिमिटेडले एकै दिन दुईओटा शाखा खोलेको छ । बैङ्कले विराटनगरको मेनरोड र काठमाडौँको बसुन्धरामा ती शाखा स्थापना गरेको हो । बिहीवार आयोजित छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमबीच बैङ्कका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेले बसुन्धारा र सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय अनिल खरेल र पवनकुमार भीमसरियाले विराटनगर मेनरोड शाखाको उद्घाटन गरे । स्थानीयस्तरका साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा कर्जा लगानी तथा आकर्षक निक्षेप योजना प्रदान गरी बैङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ती क्षेत्रमा शाखा स्थापना गरेको अध्यक्ष न्यौपानेले बताए । बैङ्कले विद्युतीय उपकरणमार्फत चेक पढ्न सक्ने बार कोड प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याएको छ । चेकमार्फत हुने सबै कारोबारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउने ‘बार कोड प्राविधि’ नेपालमै पहिलोपटक भित्र्याइएको बैङ्कको दाबी छ । बैङ्कले सञ्चालन अवधिको ९ महीनामा रू. २ अर्ब ५३ करोड निक्षेप सङ्कलन तथा रू. २ अर्ब ३३ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
वीरगञ्जमा सानिमाको शाखा
सानिमा विकास बैङ्कले वीरगञ्जको लिङ्करोडमा आफ्नो शाखा स्थापना गरेको छ । यससँगै बैङ्कका २१ शाखा पुगेका छन् । बिहीवार आयोजित एक कार्यक्रमबीच सञ्चालक पङ्कज अधिकारीले उक्त शाखाको उद्घाटन गरे । उक्त अवसमारमा सञ्चालक अधिकारीले सानिमा बैङ्क केही महीनाभित्रै वाणिज्य बैङ्कमा स्तरोन्नति हुने जानकारी दिए । यसका लागि आवश्यक २ अर्ब रुपैयाँ र अन्य पूर्वाधार तयार भइसकेको उनले बताए । बैङ्कले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्म रू. ६ अर्ब ६४ करोड निक्षेप सङ्कलन तथा ६ अर्ब ९० करोड कर्जा लगानी गरेको छ । उक्त अवधिमा ९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको बैङ्कले जानकारी दिएको छ । जारी तथा चुक्ता पूँजी २ अर्ब १ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको सानिमाले आफ्ना देशभरका ग्राहकलाई एससीटी नेटवर्कसँग आबद्ध कुनै पनि एटीएम काउण्टरबाट रकम झिक्न सकिने व्यवस्था मिलाएको बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्सालले बताए ।
पब्लिकले हिमाल रेमिटको सेवा दिने
पब्लिक डेभलपमेण्ट बैङ्कले बिहीवारदेखि हिमाल रेमिटयान्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । सेवा प्रारम्भका लागि पब्लिक डेभलपमेण्ट बैङ्कले बतास एशोसिएट्ससँग सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौताअनुसार हिमाल रेमिटमार्फत विदेशबाट नेपाल पठाएको रकम पब्लिक डेभलपमेण्ट बैङ्कका सम्पूर्ण शाखाबाट सजिलै भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । केन्द्रीय कार्यलय वीरगञ्जमा रहेको बैङ्कले निक्षेप सङ्कलन, कर्जा प्रवाह तथा आन्तरिक र बाह्य रेमिटयान्स सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हिमाल रेमिटबाट ग्राहकहरूका आफन्तले साउदी, कतार, बहराइनलगायत मुलुकबाट पठाएको रकम बैङ्कबाट सजिलै प्राप्त गर्न सकिने जानकारी दिइएको छ ।
साउथवेष्टर्नको प्रदर्शनी तथा मेला
‘विज्ञान प्रदर्शनी तथा व्यवस्थापन क्यारियर मेला-२०६८’ बसुन्धरास्थित साउथवेष्टर्न स्टेट कलेजमा शुरू भएको छ । बिहीवारदेखि शुरू भएको मेलामा देशभित्रै विज्ञान र व्यवस्थापन क्षेत्रमा भएका नयाँ प्रविधिका बारेमा जानकारी दिने आयोजक साउथवेष्टर्नले जानकारी दिएको छ । ‘यस्तो प्रदर्शनीबाट विद्यार्थीले नयाँ कुरा सिक्नेछन्,’ मेलाका संयोजक तथा कलेजका भाइस प्रिन्सिपल हरिसिंह केसीले भने । मेलामा उपत्यकाभित्र र बाहिरका विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, वित्तीय संस्था, अमेरिकन लाइब्रेरी सेण्टरलगायत संस्थाका स्टल रहेका छन् । शुक्रवारसम्म सञ्चालन हुने प्रदर्शनीको २० हजार दर्शकले आवलोकन गर्ने आयोजकको आशा छ । रिमोट कण्ट्रोलबाट उडाउन सकिने हवाइजहाज, सजिवनको तेलबाट गुड्ने गाडी, पानी तान्ने मोटरलगायत वस्तु प्रदर्शनीको मुख्य आकर्षण रहेका छन् ।
प्राइम लर्निङको सहयोग
प्राइम लर्निङ सेण्टर र त्यहाँ अध्यनरत ब्रिज कोस तथा सीएमएटीका विद्यार्थीहरूले ‘वर्ल्ड एज म्यानेजमेण्ट सोसियल वेलफेयर ट्रष्ट’लाई खाद्यान्न, कपडा तथा स्टेशनरीका सामग्री सहयोग गरेका छन् । विद्यार्थीहरूको संलग्नतामा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यस्तो सहयोग गरिएको प्राइम लर्निङले बताएको छ । वर्ल्ड एज म्यानेजमेण्टमा २८ अशक्त तथा बेसाहरा आमा तथा ४७ जना अनाथ बालबालिका आश्रति छन् । सेण्टरका सीईओ सत्यबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको लागि विद्यार्थीहरुको केही दिनको खाजाको रकम कटौती गरी योगदान दिएका थिए ।